eCADLite: Beddelka kale ee Microstation - Geofumadas
eCADLite: Beddel kale oo loogu talagalay Microstation
Luulyo, 2009 Microstation-Bentley
Habka dgn wuxuu ahaa mid xasilloon, barnaamijyo badan oo SIG / CAD ah ayaa aqoonsanaya, laakiin wax ka beddelkeedu wuxuu mar walba ahaa mudnaan gaar ah Microstation inkastoo ay jiraan saddex nooc oo kala duwan oo ah qaabka: IGDS, V7 iyo V8.
Marka la eego habka dwg, Microstation waxay ku guulaysatay inay furto oo ay ku saxdo, sida dhammaan barnaamijyada ku dhasha xariiqa IntelliCAD. Laakiin qaabka dgn, xaqiiqda ah Microstation waa software la leh macaamiisha yar yar marka la barbar dhigo AutoCAD, codsiyo aad u yar ayaa la arkay, laga soo bilaabo mashruuca Pangea kuwaas oo ujeedkoodu yahay "waxyaallaha" oo la socda faylasha dgn laakiin maaha in la dhiso xogta qaab caadi ah.
eCADLite waa mid ka mid ah bedelaadahaan, xal milkiile ah oo uu dhisay shaqaale hore oo ka tirsan Intergraph iyo Bentley, oo lagu dhisay koodhka Pangea. Inkasta oo, isticmaale Microstation aan jeclaan laheyn waxkasto deegaankiisa, xaddidaya oo kaliya oo leh laba qaybood oo keliya; laakiin waa wax laga bedelayo kiis shirkad aan ka faa'iideysanaynin wax ka badan 20% ee suurtogalka Microstation, oo "nalka" aan ka hooseeynin $ 1,000, (PowerDraft).
eCADLite waxaa la bilaabay sanadka 2000, inkastoo ay u shaqeyso qaababka V8, muuqaal badan oo muuqaalkeeda waxay u muuqataa inay ku sii jirtey interface V7, laakiin waxa jira waxyaabo ay tahay in loo aqoonsado in ay yihiin:
Waxay u egyihiin sida Windows
Sidii aan idhi, isticmaale khaas ah ee Microstation ayaa laga yaabaa inaanay jeclaan tan, laakiin qof u baahan inuu beddelo faylasha dgn iyo kuwa yaqaan Windows waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh. Oo micnaheedu waa Microstation waxay sii wadaa inay ilaaliso qaar ka mid ah "heshiisyada gaarka ah" ee isticmaalka calaamado badanaa ka cabsada userka cusub, inkasta oo iyaga oo si joogto ah u caawiyay inay sii wadaan kalsoonida iyaga oo diirada saaraya isbeddelada awoodooda ka hor inta aan la taaban.
Ka eeg garaafka dhinaca midigta, maadaama ay u egtahay midda caadiga ah ee Xafiisyada Microstation inay isku dhafan yihiin. hehe
Waxay hagaajinaysaa ugxanta ugu badan ee Microstation
Ma ahan heshiis weyn, laakiin abuuraha eCADLite wuxuu bilaabay inuu ka fekero waxyaallaha Microstation si fiican u shaqeynaya, laakiin qaab aan caadi aheyn. Tusaale ahaan tani waa aragtida, inkasta oo ay soo dhawaatay dhowaan laga soo bilaabo XM, dad badan ayaa doorbidaya inay dhisto qaab dhismeedka AutoCAD; sidoo kale xakamaynta qaybaha (unugyada) kuwaas oo si toos ah loola dhaqmi karo iyo jawi habboon oo loo marayo, iyo waxa laga yaabo inay ka hadlaan cabbiraadda: eCADLite waxay u adeegsataa qaab aad u macquul ah. Xitaa khadadka casriga wuxuu leeyahay awoodo badan oo lagu xayeysiinayo bandhigga iyo xakamaynta sifooyinka.
Beddel dgns asalka ah
Inkasta oo dgn uu yahay qaab aad u deggan oo waqti dambe ah, AutoCAD illaa dhammaadkii ugu dambeeyay ayaa ku soo biirtay doorashadii lagu soo rogi lahaa dwg. eCADLite waxay akhrin kartaa labadaba V7 iyo V8 dgn, laakiin kaliya laba cabbir. Waxaad sidoo kale wici kartaa faylasha dwg, dxf iyo faylasha raajada.
Faylasha dgn, xaashiyo daabacan iyo khadadka casriga ah ayaa lagu dhisi karaa mashaariicda noocyada fiilooyinka si loo xakameeyo.
Qiimuhu wuxuu u socdaa $ 300, marka laga reebo eCADLite waxaa jira barnaamijyada kale ee GraphStore, kaas oo siinaya nooc kale oo awood ah, sida:
Asset2000. Tani waa bay'ad la mid ah sida ay u shaqeyneyso ProjectWise (laakiin muraayadaha yar yar), taas oo aad sameyn kartid khiyaamo sida isku xirka xogta vector-ka si loo kaydiyo, xisaabinta ama xiriirinta faylasha dibadda.
AssetX. Tani waxay leedahay sifooyinka Asset, laakiin marka lagu daro iyada oo la adeegsanayo ActiveX waxaa lagu dari karaa shabakadda ama horumarinta isbitaallada kale.
eCADLite waxaa laga soo rogi karaa shabakadda GraphStore si ay u noqoto mid tijaabo ah. Inkasta oo koodhku furfuran yahay.
Post Previous«Previous MobileMapper 6 vrs. Juno SC
Post Next Qaab siman oo loogu talagalay CadastreNext »